Nagarik News - बेलायतमा उत्तेजक आइटम
बेलायतमा उत्तेजक आइटम
निर्देशकलाई फिल्मको क्याप्टेन भनिन्छ। किनभने निर्देशकबिना फिल्मअघि बढ्दै सक्दैन। तर, एउटा फिल्मको १० प्रतिशत सुटिङ निर्देशकबिना नै सकिएको छ। कुरा फिल्म 'आधी बाटो'को हो। निर्देशक सविर श्रेष्ठलाई बेलायतले भिसा नदिएपछि त्यहाँ खिच्ने भनिएको फिल्मको केही भाग उनीबिनै सुटिङ सकिएको छ।
बेलायतका विभिन्न भूभागमा केही दृश्य खिचिनुका साथै त्यहाँको समुद्रीतटमा एउटा आइटम गीत पनि सुटिङ भएको छ। अभिनेत्री जेनिसा केसीले उत्तेजक भावभंगीमा समुद्री तटमा कम्मर मर्काएकी हुन्। पारदर्शी पहिरनमा उनले उक्त गीतमा नृत्य गरेको बताइएको छ। फोटोग्राफर कुशल श्रेष्ठले उक्त दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्नुका साथै निर्देशनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। फिल्ममा सविन श्रेष्ठ, रुबी राणा, यशकुमार लगायतले अभिनय गरेका छन्।
जेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान, सम्भावित अनिकाल लगायतका विषय चौतारीमा छलफल भइरहेका थिए। आखिर चौतारी न हो, देश विदेशको...
अभिनेत्री निशा अधिकारीले केही दिनअघि पत्रकारहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्दै व्यंग्यात्मक स्ट्याटस फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। पत्रकारहरूले एक प्लेट मःमःको भरमा समाचार लेख्छन् भन्ने आरोप उनको स्ट्याटसमा मुछिएको छ। उनको व्यंग्यप्रति केही...
जनतालाई बुझाउन नसकिएको संघीयता
प्रदेश सीमांकनविरुद्ध केही जिल्ला तथा क्षेत्रमा भइरहेको विरोधले देशलाई संघीय ईकाइमा बदल्ने काम नेताहरूले सोचेजस्तो सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ। प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सीमांकन र नामांकन पछि...
ब्राः उहिले र अहिले
'ब्रा' आजका महिलाको अभिन्न पहिरन हो तर पनि कतिपय मान्छे यसलाई यौनसँग सम्बन्धित पहिरन मान्छन्। यसैलाई आधार बनाएर कतिपय डिजाइनर तथा व्यवसायीले अनेक आकार–प्रकार एवम् ढाँचाका लोभलाग्दा र कामुक प्रकृतिका...
अवार्डः कसले, कसलाई, किन?
नेपाली फिल्म र संगीत क्षेत्रमा बर्सेनि अवार्ड थपिइरहेका छन्। सर्जकको पेशागत उचाइ, सिर्जना र लगनको सम्मान गर्नेहरू बढ्नु कला क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो। यस्तो कर्मले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सघाउ...
किन पछि हट्यो त्रिवि?
यसैवर्षदेखि उपत्यकाका सबै आंगिक क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि हट्यो। विद्यार्थी संगठनहरूको चर्को दबाब थेग्न नसक्दा त्रिवि पछि हट्न बाध्य भयो।